Ukushajwa kabusha kwe-TIM: indlela yokushajwa kabusha noma kuphi
U-TIM umuntu engimaziyo Umhlinzeki wezokuxhumana we-Brazilian ehlinzeka ngezinsizakalo zocingo, kokubili iselula nezilungisiwe, ukufinyelela ku-inthanethi ngaphansi kwamanethiwekhi e-3G kanye ne-4G, kanye ne-broadband. Le nkampani njengamanje inezinsizakalo zephakeji yezwi nedatha yezinkampani ezincane, eziphakathi nezinkulu eziyidingayo.
Le nkampani isebenza eBrazil kusukela ngo-1998, ingenye yezingqalabutho ngenxa yazo zonke izinhlelo ezehlukene ebizinikeze amakhasimende ayo selokhu yaqala ngalowo nyaka. Le nkampani iyingxenye yeqembu leTelecom Italia futhi njengamanje ikomkhulu layo liseRio de Janeiro, nakuba linezinye izindawo ezweni.
Njengamanje kuzo zonke izifundazwe, i-Tim inamakhasimende angaphezu kwezigidi ezingu-76 kuzo zonke, futhi isizisungule njengomunye wabaqhubi abaqine kakhulu ezweni. Ngaphezu kwalokho, i-TIM isohlwini lwe-BM&F Bovespa2 kanye ne-NYSE, uhlu olu-3 emakethe yesitoko yaseSao Paulo naseNew York.
¿Udinga ukushaja kabusha i-TIM futhi awazi ukuthi kanjani? Sichaza izindlela ezahlukene okufanele ukwazi ngazo gcwalisa kabusha ulayini kanye nalawo mashaneli atholakalayo. Phakathi kwalezo ezitholakalayo kukhona lezi ezilandelayo: Ama-ATM, i-inthanethi, izitolo, ukubhanga ngogesi nezinye izindlela ezengeziwe.
Uyishajwa kanjani kabusha i-TIM
I-TIM ineziteshi ezimbalwa zokuthi amakhasimende ashaje kabusha amaselula awo ngendlela enethezekile nokuthi aziphelelwa ibhalansi noma nini. Ngalokhu uzosindisa isikhathi esiningi, ukushaja kabusha ngendlela ezolile usekhaya, kungaba ngeyakho ifoni, i-PC, ithebhulethi, phakathi kwamanye amadivaysi.
Uma, ngakolunye uhlangothi, ufuna ukushajwa kabusha emgwaqeni, izinketho ziba ezinye, ngokushesha njengokusebenzisa inketho yeselula. Emgwaqeni ongakhetha kukho Ama-ATM nezitolo ziyatholakala, ibhange ngalinye linobudlelwane nabaqhubi bezwe ukuze lishaje kabusha lisuka ku-akhawunti yasebhange.
Ku-inthanethi kunamakhasi amaningana wokwengeza omakhalekhukhwini, okuhlanganisa nezinhlelo zokusebenza, ezitholakala kuzinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS. Inkampani incoma ukusetshenziswa okukhethekile kwezindlela zokushajwa kabusha zendabuko, noma ngabe zingezakudala Ama-ATM, izitolo ezikhethekile noma ukusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni, ngaphezu kwamasayithi agunyaziwe.
Shaja kabusha i-TIM kusukela ku-inthanethi
Kusuka I-TIM ku-intanethi ungakwazi gcwalisa ibhalansi futhi ngaleyo ndlela ukhokhe ne-invoyisi usebenzisa ikhadi lesikweletu. Into yokuqala ukubhaliswa ekhasini, uma usubhalisiwe ungenza zonke izinhlobo zemisebenzi, kusukela ekushajeni kabusha, ukukhokha izikweletu kanye nokubhalisa noma yiziphi izinkonzo.
Uma ubhalisile, uyakwazi ukufinyelela endaweni yamakhasimende, lapho unezinketho eziningi ongasebenza nazo, nokuba nengxoxo yosizo uma kwenzeka udinga ukuxazulula noma yikuphi ukungabaza. Yini enye, ukwesekwa kunwetshwa ngenombolo yocingo yesevisi yekhasimende ngesikhathi esinqunywe yinkampani.
Ukufaka kufanele ufake i-imeyili (i-imeyili obhalise ngayo) kanye nephasiwedi, ngalezi zinyathelo ezimbili uzokwazi ukungena. Uma ukhohlwe iphasiwedi, unenketho yokukwazi ukuyithola, bazokuthumela i-imeyili yokutakula, futhi unenketho yokuthumela i-SMS ocingweni.
Lapho ishajwa kabusha, umsebenzisi unakho onakho izindlela ezivame kakhulu zekhadi lesikweletu, i-Visa noma i-Mastercard, athandwa kakhulu. Ukwengeza, ukushajwa kabusha ngokubhanga nge-inthanethi, kungenziwa kusuka ku-Recharge, Ding, Doctor SIM, Allo by Monisnap, Xoom and Ezetop.
Uma ufuna ukushajwa kabusha kwamanye alawo masayithi, kuvumelekile ukwenza kanjalo ngokufinyelela kuphothaliAbanye bacela imininingwane yasebhange kuphela, bonke banohlelo lokuvikela (amakhasi abethelwe). Zonke zinikeza isevisi efanayo, ukushajwa kabusha komugqa emizuzwini embalwa nje, isikhathi esisithathayo ukucubungula.
Ukushajwa kabusha okuvela kuma-ATM kuzokwenziwa emabhange amaningi, kusukela I-TIM inezivumelwano nawo wonke amabhange ezweni. Phakathi kwabo kukhona iBanco Santander (Brazil), Banco Itaú, Banco Safra, Central Bank of Brazil, Banco do Nordeste, BTG Pactual, Nubank, Unibanco, Banco Votorantim, Unibanco, C6 Bank, Caixa Econômica Federal, Banrisul kanye neBanco Sofisa.
Ukwenza ukushajwa kabusha kubalulekile ukuba nekhadi lesikweletu, uma selifakiwe faka iphinikhodi bese esigabeni sokushajwa kabusha khetha u-opharetha, kulokhu i-TIM. Kukhona inani elincane neliphezulu lokukhokhiswa kabusha ngomugqa ngamunye, ngaphezu kokukwazi ukukhokha imali yanyanga zonke yezinkonzo ezinenkontileka.
Shaja kabusha ezitolo
Namuhla kunezitolo eziningi ezitholakalayo zokushajwa kabusha ulayini we-TIM. Ezinye zalezo ezifinyelelekayo yilezi: TIM, Movilway, Disashop, FonMoney, Epay, Boss Revolution, Scip, Majority, VAS call centre kanye nezitolo ezingaphezu kwamashumi amabili ezitholakalayo ukuze ushaje kabusha ngokushesha, kungaba ngokheshi noma ngekhadi.
Kunoma yiliphi kulawa maphuzu ungakwazi ukushajwa kabusha ulayini, ihlinzeka kuphela ngenombolo yocingo kanye nokukhokha imali ethile. Amakhasimende azokwazi ukushaja kabusha phakathi namahora ebhizinisi, okuzoncika ekusungulweni ngakunye.
Faka i-TIM ebhange ngocingo
Indlela esheshayo nelula yokushajwa kabusha ngefoni evela ebhange. Ukuze wenze lokhu kufanele ube yikhasimende lasebhange futhi ushayele izinombolo ezihambisanayo. Uma ukwenza kwelinye lamabhange eBrazil, kufanele unikeze inombolo ye-akhawunti, iphasiwedi bese ufaka inombolo yomugqa.
Amabhange avamise ukushesha futhi asebenze ngempumelelo, ngakho-ke kuhle kakhulu ukuthi ukwenze usuka kumakhalekhukhwini wakho noma ocingweni lwasendlini ekhaya, ivamise ukuxhuma ngokushesha futhi ibe nedatha ehambisanayo. Ulayini wocingo uwukhetho, ngaphandle kokuba nohlelo oluzoncika ekuvulweni kwebhange ngalinye, nakuba ngezinye izikhathi basebenzisa imishini yokuphendula eyibambayo.
Enye indlela yokushajwa kabusha ulayini we-TIM ukuya kumakhiosks agunyaziwe, lapha kufanele unikeze inombolo kuphela futhi ukhokhe inani lokushajwa. Okunye okukhethwa kukho ngaphandle kwama-kiosk izitolo ezigunyazwe, kungaba ngekhompyutha, amagalaji kaphethiloli nezinye izikhungo ezikhethekile.
Ukuze ushaje kabusha ulayini we-TIM, cela umuntu ophethe ikhiyoski noma isitolo, ngalokho kufanele ukwenze faka inombolo eqondile kanye nenani eliqondile. Uzothola umlayezo uma ukushajwa sekuqediwe futhi uzoba nolayini ngaleso sikhathi ukuze ukwazi ukukhuluma ngezwi ne-inthanethi.
Gcwalisa ngohlelo lokusebenza lwe-TIM
Ngezinhlelo zokusebenza ezisemthethweni ze-TIM ungakwazi ukushajwa kabusha ulayini, konke ngendlela elula nangezinyathelo ezimbalwa. I-TIM Android App, Uhlelo lokusebenza lwe-TIM iOS Futhi kusukela ekusetshenzisweni kwebhange lakho, elokugcina lizoncika kulelo olisebenzisayo, vele ungene ngemvume, hamba uyokushaja kabusha iselula yakho bese ufaka idatha, okuhlanganisa inombolo kanye nenani.
Izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ushaje kabusha yilezi: landa uhlelo lokusebenza lwedivayisi yakho (i-Android / iOS), faka igama lomsebenzisi nephasiwedi yokufinyelela, uma ungenayo, chofoza lesi sixhumanisi okwerekhodi. Ngohlelo lwe-TIM ungenza imisebenzi ejwayeleke kakhulu, ehlanganisa ukushajwa kabusha, imibuzo yolayini nokunye ukusebenza.
Enye indlela esebenze isikhathi eside iwukusebenzisa amakhadi esipho, asebenzele wena futhi aklanyelwe ngaphezu kwakho konke ukunikeza abanye abantu. Wonke amabhizinisi ngokuvamile anekhadi lalolu hlobo, zikhona ngamanani ahlukene futhi kulula ukuzisebenzisa.
Izitolo, amabhizinisi namakhasi aku-inthanethi akuvumela ukuthi uthole ikhadi lalolu hlobo, ukwazi ukukhokha ngezindlela eziningana, eyokuqala iwukheshi, eyesibili neyokugcina ngekhadi. Ikhasimende lizoba nekhadi, linenombolo okumele liyifake kanye nekhodi yokuqinisekisa.
Elinye lamakhasi onganikeza ngalo ikhadi lalolu hlobo yi-Ding, yalokhu Izokubuza inani lokushajwa kabusha, inombolo futhi ekugcineni kuzoba yinkokhelo yekhadi. Ukuxhumana kwenzeka khona manjalo, ngakho-ke uzoba nalelo khadi elitholakala ngokwedijithali ukuze ulithumele kumuntu ngeposi noma ngohlelo lokusebenza lwangaphandle.
Phezulu kuselula » Amabhange » Ukushajwa kabusha kwe-TIM